Moments Neshamwari 3
Mutsamba ichangogashirwa, shamwari inobvunza kuti: Sei zviri nani kuva nemuviri wakacheneswa mushure mekufa panzvimbo yekuuviga?
Pane zvikonzero zvakawanda zvakakwirira mukufarira chitunha. Pakati pavo imwe inotonhora pakutsva, yakachena, inoda kamuri shoma, uye isingaite hosha, dzakadai sedzinowanzobva kumakuva, pakati pevapenyu. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti mberi neTheosophists, kureva, kuti kufa ndiko kubuda kwemitemo yepamusoro, uye zvinoreva kusiya muviri uri imba isina chinhu. Mushure mekunge mweya wemunhu wazvibvisa wega kubva pane zvakasara, pane yakasara yemuviri wemuastral, iyo yakapa nekuchengeta iyo yemuviri muchimiro, uye nemuviri wechido. Muviri kana chemuviri muviri unogara mukati, uye unogara kwenguva yakareba, wemuviri, unopera senge kuora kwemuviri. Muviri wechido, zvisinei, isimba rinobata basa rinogona kuita kukuvara zvakaenzana sezvo zvishuwo zvaive zvakaipa kana zvirimukati mehupenyu. Muviri wechido uyu unogona kugara kwemazana emakore kana zvishuwo zvacho zvakaumbwa zvine simba zvakakwana, nepo muviri wenyama uchigara makore mashoma. Uyu muviri wekuda ndeye vampire inodhonza simba rayo, kutanga kubva pane zvakasara uye kechipiri kubva kune chero mupenyu mweya unoipa iyo vateereri, kana kubvuma kuvepo kwayo. Muviri wechido unokwevera chikafu kubva kune yakafa fomu uye astral muviri, asi kana muviri wenyama wakatemwa unodzivirira zvese zviri pamberi. Izvi zvinoparadza masimba emuviri wemuviri, zvinosemesa muviri waro wepasuru, zvinogadzirisa izvi muzvinhu izvo kubva pazvakazvarwa zvisati zvazvarwa uye zvichiri kurarama munyika, uye zvinogonesa pfungwa kuti izvigone kupesana kubva mumuviri wekuchiva uye ichipfuura zorora izvo zvinamato zvinoti kudenga. Hatigone kuita basa rakakura kune avo vatinoda uye avo vabuda muhupenyu huno pane kuti miviri yavo itungidzwe vobva vadzoreredza pane kukosha kwekuzunza coil yemunhu uye nekutyisa kweguva.
Pane humwe chokwadi munyaya dzatinenge taverenga kana kunzwa nezvadzo, pamusoro pemampires uye vampirism?
Isu tinorarama muzera rakazara nesainzi zvakanyanya kubvumira kuti kuve nekuve nechokwadi chero chipi zvacho munhau dzakadai dzenhau dzakadai seye mavampires. Asi, zvakadaro, chokwadi chichiripo, uye varume vazhinji vesainzi, ivo vakararama makore eshura, vava nekufungidzira zvakanyanya pane vanotenda zvakanyanya kana vava neruzivo nevampire; zvino yaive nguva yavo yekuwana kushoropodzwa nejibha zvevamwe vesaenzi. Imwe mukana wekusapararira kwekunyanya kuda zvinhu nezve sub-mundane uye super-mundane zviripo, ndeyekuti inotora pfungwa yakakurumbira kure nezviitiko zve goblins, ghouls, uye vampires, nekuseka zvinhu zvakadaro. Naizvozvo kune zvishoma vampirism kupfuura muMiddle Ages apo munhu wese aitenda kun'anga neuroyi. Vampires ichiripo uye ichaenderera mberi nekuumbwa nekuchengetwa ichirarama chero hupenyu hwevanhu vachirarama hupenyu hwakaomarara, mahuri mahuri kufunga uye chishuwo kuuraya vavengi vavo, kubiridzira varombo uye vasina rubatsiro, kukanganisa hupenyu hweshamwari yavo, uye kubayira vamwe kuzvido zvavo zveudyire uye zvemakaro. Kana munhu wenyama aine zvishuwo akasimba uye ane hunyanzvi ane hana yakadzikira kana yakatsikirirwa, akararama hupenyu hwoudyire, asina tsitsi nevamwe kana zvishuwo zvake zvichinetsekana, anotora mukana wese ungangoita mubhizinesi, anoregedza pfungwa yetsika, uye achizviisa vamwe pasi zvishuwo zvake munzira dzose dzinogona kuwanikwa nenjere dzake: zvino kana nguva yekufa kwemurume akadaro yasvika panoumbwa mushure mekufa icho chinonzi muviri wechido, chesimba uye nesimba rinosemesa. Izvi zvakanyatsosarudzika kubva kune imwe fomu yeastral iyo inofamba-famba ichitenderera nokusara kwemuviri. Iyo yekuchiva muviri inosimba pane iyo yemunhu wepakati uye ine simba rakanyanya, nekuti pfungwa dzichiri muhupenyu dzakange dzakatarisana nezvishuvo. Uyu muviri wekuchiva ndiyo vampire mukuti unotora pane vanhu vese vanozovhura musuwo nehupenyu, pfungwa, uye zvishuwo, uye vasina kusimba zvakakwana mukubvumira iyo vampire kukunda kwavo kwetsika. Ngano dzinotyisa dzinogona kutaurwa nezve zviitiko zvevakawanda avo vakapamba yevampire. Mutumbi weavo akadai akararama hupenyu hwevampire unowanzo kuwanikwa hutsva, hukasimba, uye nyama yacho ichange ichidziya makore mushure mekunge yapinda muguva. Izvi zvinongoreva kuti muviri wekuchiva dzimwe nguva wakasimba kuti ugone kutaurirana neiye munyama kuburikidza neastral body, uye nekuramba wakanyatso chimiro chemuviri, kuburikidza nehupenyu wakazvipa nehupenyu hwakatorwa kubva kumiviri yehupenyu hwevanhu vanorarama neiyo vampire kana kuda muviri. Kupisa kwemuviri nekutora chitunha kunobvisa mukana wevampire yemunhu kuchengetedza muviri wayo wemuviri nehupenyu hwakatorwa kubva kune hwevapenyu. Muviri wemunhu, zvakaringana kunge isimba rekuchengetera kana imba yekuchengetera, raparara uye muviri wechido haukwanise kutora hupenyu hwevanorarama nekukadzivirirwa kuti usvike padhuze navo.
Ndeipi chikonzero chekufa kamwe kamwe kwevanhu kana vari vaduku kana muhukuru hwehupenyu, apo zvingaita sekuti makore mazhinji ekubatsira uye kukura, mupfungwa uye mumuviri, ari mberi kwavo?
Kana mweya wauya muhupenyu, ine chidzidzo chakatsiga chekudzidza, pakudzidza icho chingaitika kunze kwekuda. Iyo nguva iyo chidzidzo chehupenyu hwakati hunodzidziswa, inogona kunge iri makore mashoma kana kuwedzerwa pamusoro pezana, kana chidzidzo chingasave chakadzidza zvachose; uye mweya unodzokera kuchikoro zvakare uyezve kudzamara pawadzidza icho chidzidzo. Mumwe anogona kudzidza zvakawanda mumakumi maviri nemashanu emakore pane mumwe anogona kudzidza mune zana. Hupenyu munyika ndewechinangwa chekuwana ruzivo rwepedyo rwechokwadi chekusingaperi. Hupenyu hwega hwese hunofanirwa kusimudzira mweya iwo mumwe dhigirii padyo nekuzviziva. Izvo zvinowanzonzi tsaona dzinongova kuitawo zvakadzama mutemo wezvese. Tsaona kana kuitika ndeye imwe chete diki arch yedenderedzwa rekuita. Tsaona inozivikanwa kana kuti yaonekwa, iko kungoenderera nekupedzisa kwechisingaonekwe chikonzero chekuti uite. Zvinoshamisa kuti zvingaite senge, tsaona dzinowanzo kukonzerwa nepfungwa dzinogadzirwa. Mufungo, chiitiko, uye tsaona dzinoumba kutenderera kwakakwana kwechikonzero nemhedzisiro. Icho chikamu chechitenderera chechikonzero nechimiro chinobatanidza chinokonzeresa nemhedzisiro chiito, icho chingave chinoonekwa kana chisingaoneki; uye icho chikamu chechitenderera chechikonzero nechimiro icho chiri mhedzisiro uye mhedzisiro yechikonzero, mutsaona kana kuitika. Tsaona imwe neimwe ingateedzeredzwa ichienda kwairi Kana tikawana chaipo pacho chetsaona chero ipi zvayo zvinongoreva kuti chikonzero chave chigadzirwa chazvino, izvo zvinoreva kuti ingori diki diki rekufunga, chiito, uye maitiro, zvinova zvichangoburwa asi kana tsaona kana mhedzisiro yakamira yoga uye imwe isingakwanisi kuona kamwechete yakatangira nechikonzero, izvi zvinoreva kuti kutenderera kwemafungiro haisi diki, uye saka ichangopfuura, asi yakawedzera kutenderera kufunga uye kuita izvo zvinogona kuwanikwa muhupenyu hwakatangira kana hwese hwakatangira.
Kana ruoko rwechidiki, gumbo, kana imwe nhengo yemuviri isingasunungurwi apo nhengo yemuviri inobviswa, nei muviri we astral usingakwanisi kubereka imwe ruoko rwenyama kana gumbo?
Mubvunzo uyu waizoratidzika kunge wakabvunzwa pane fungidziro yekuti muviri we astral haupo, sekunge uriko unokwanisa kubereka chero nhengo yemuviri kana warasika, kunyanya sezvo zvichinzi kune vese vekwa Theosophists kuti chinhu chemuviri chakavakwa mukati memuviri wemunhu zvichienderana kumagadzirirwo emukati kana astral muviri. Asi iyo tsananguro iri nyore. Panofanirwa kuva nesvikiro rwekunyama iro pachishandiswa icho chinhu chemuviri chinoshandurwa kuita chimwe chinhu chemuviri uye panofanirawo kunge paine muviri kune imwe neimwe yemapuranga ayo pairi kushanda. Svikiro repanyama iropa, iro pachishandiswa chikafu chinoshandurwa kuva muviri. Iyo linga sharira ndeyemhutu muchimiro, nepo muviri wenyama unoumbwa nesisitiri yemasokisi. Zvino kunyangwe ruoko rwemuchadenga haruwanzo kubviswa kana nhengo yemuviri yadurwa, hapana svikiro repakati nepakati iro chinhu chemuviri chinogona kubatanidzwa uye nekuvakwa pane chechisimba. Naizvozvo, kunyange ruoko rwe astral ruripo, harukwanisi kuendesa chinhu chemuviri pachako nekuti hapasisina svikiro repanyama rekuchinjisa chinhu chemuviri. Saka iyo molecia astral mubatanidzwa wesero remuviri ruoko rakadimburwa harina nzira yekuzvivakira pachayo. Zvakanakisa zvinogona kuitwa kuvaka maturakiti matsva kumucheto kwechitofu uye nekudaro osunga ronda. Izvi zvichatsanangurawo kuti maronda anoporeswa sei, uye nei mavanga akadzika aramba aripo kana nyama isina kuunganidzwa padyo nepanokwana kuti tishu titaure netauro.